Iyo Apple Watch inogona kuona Coronavirus zvisati zvaonekwa zviratidzo zvekutanga | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch inogona kuona Coronavirus zviratidzo zvekutanga zvisati zvaonekwa
Iyo Apple Watch ndeimwe yeakanakisa zvishandiso izvo Apple anayo. Chiedza uye chidiki asi chakazara netekinoroji. Yakatanga se wachi iyo ingatiponese isu kubva pakutarisa iyo iPhone kakawanda asi nekufamba kwenguva yakawana nzvimbo yekukudzwa pakati pevashandisi mune yayo yega. Nayo tekinoroji iyo inotibatsira isu vashandisi kuti tigare tichitarisa padhuze pamwoyo yedu. Inotibatsira kana kudonha Uye ikozvino zvidzidzo zviviri zvitsva zvinoti iyo Apple Watch inogona kuona Coronavirus zviratidzo zvekutanga zvisati zvaonekwa.
1 Zvidzidzo zvakati wandei kubva paGomo reSinai neStanford vanoti Apple Watch inogona kuona Coronavirus zviratidzo zvekutanga zvisati zvaonekwa
1.1 Tsvagiridzo yakaitwa neGomo reSinai muNew York:
1.2 Chidzidzo cheStanford chakafanana chaizvo nekudzidza kweSinai:
Zvidzidzo zvakati wandei kubva paGomo reSinai neStanford vanoti Apple Watch inogona kuona Coronavirus zviratidzo zvekutanga zvisati zvaonekwa
Nhau yakaburitswa neAmerican media CBS, inotaura kuti kune akati wandei matsva ezvidzidzo izvo zvinoratidza kuti Apple Watch, pakati pevamwe, inogona kubatsira kuona COVID-19 pamberi pekuonekwa kwezviratidzo zvekutanga kana kuve nemhedzisiro yemuyedzo wakanaka. Iyo zvidzidzo, zvakaitiswa zvakasiyana neGomo Sinai Health System muNew York neStanford University muCalifornia, ivo vari kupa nyanzvi tarisiro yekuti Apple Watch inogona kubatsira "kutora chinzvimbo chakakosha mukumisa denda nezvimwe zvirwere zvinotapuriranwa."
Tsvagiridzo yakaitwa neGomo reSinai muNew York:
Kuongorora yakagadzirwa neGomo reSinai vakawana kuti Apple Watch inokwanisa kuona "shanduko dzisinganzwisisike mukurova kwemoyo wemunhu" anosvika mazuva manomwe kusati kwatanga zviratidzo COVID-19 kana bvunzo yakanaka. Chidzidzo ichi chakatarisa kusiyanisa kwemoyo, kana musiyano wenguva pakati pekurova kwemoyo, pakati pevashandi vangangoita mazana matatu vezvehutano vakapfeka wachi pakati paApril 300 naGunyana 29.
Chirevo chinotaura zvinotevera mareferenzi uye mhedziso, maererano naRob Hirten, mutevedzeri purofesa wemishonga paIcahn Chikoro cheMishonga paGomo reSinai muNew York uye munyori wechidzidzo cheWarrior Watch.
Chinangwa chedu chaive chekushandisa maturusi ekuona hutachiona panguva yehutachiona kana vanhu vasati vaziva kuti vairwara. Isu tanga tatoziva kuti chiyero chemoyo chinosiyana mamaki anochinja sekukura kunowedzera mumuviri. Chirwere chakakonzerwa neCOVID-19 chinogadzira zvakakosha zvikamu zvekuzvimba. Nechidzidzo ichi tinokwanisa kufungidzira nekuona avo vane hutachiwana vasati vazviziva. Pari zvino tinovimba uye tinovimba nevanhu kuti vataure kuti vari kurwara uye havasi kunzwa mushe. Nekudaro, kana uchishandisa Apple Watch, hapana chinoshanda chekushandisa chinodiwa uye inogona kuziva vanhu vanogona kunge vasina chiratidzo. Iyo nzira yekudzora zvirinani zvirwere zvinotapukira.
Chidzidzo cheStanford chakafanana chaizvo nekudzidza kweSinai:
Ichi chidzidzo chakaitiswa na Stanford, Mhedzisiro yacho yakaburitswa munaNovember, yaisanganisira zviitiko zvevateereri kwete chete kubva kuApple Watch, asiwo kubva kune mamwe mabhureki akadai saGarmin naFitbit. Chidzidzo chacho chakawana kuti izvi zvishandiso zvinogona kuratidza shanduko mukurova kwemoyo pazororo. "Kusvikira mazuva mapfumbamwe nehafu pasati kwatanga zviratidzo" mune coronavirus varwere vakanaka. Vatsvakurudzi vakakwanisa kuziva dzinenge zvikamu zviviri kubva muzvitatu zveCOVID-19 kesi mazuva mana kusvika manomwe mazuva asati aonekwa zviratidzo. Sezvinoratidzwa muchidzidzo.
Chinhu chakanyanya kukosha pamusoro pechidzidzo ndechekuti timu yakagadzirawo alarm system. Inozivisa vashandisi kuti yavo yekurova kwemoyo yakakwidziridzwa kwenguva yakasimba.
Isu tinogadzika alarm nekumwe kunzwisisika kuti iridze chero mwedzi miviri kana zvakadaro. Kugara uchichinja-chinja hakuzokonzeri alarm, shanduko dzakakosha chete uye dzakasimba ndidzo dzichaitika. Kufambira mberi kukuru nekuti zviyeuchidzo izvi zvinobvumidza vanhu vanozvitambira kukanzura mimwe misangano kuitira kuti varege kutapukirwa.
Kusiyana nezvimwe zvigadzirwa, Apple haina kubhadhara kana kutora chikamu mune chero eidzi zvidzidzo uye nzvimbo dzekurapa nekudzivirira chirwere vakaburitsa modhi iyo inoratidza mashandisiro anoita Apple Watch uye mamwe smartwatches anononoka kupararira kwe COVID-19.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch inogona kuona Coronavirus zviratidzo zvekutanga zvisati zvaonekwa
Yemahara yekugadzirisa chirongwa che13-inch MacBook Pro skrini yakawedzerwa
Kugadzira kunotanga pamwaka wechipiri waTed Lasso